Kaxda oo muranka ka baxday iyo gudoomiye cusub oo maanta xilka la wareegay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kaxda oo muranka ka baxday iyo gudoomiye cusub oo maanta xilka la wareegay
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa maanta degmada Kaxda ee gobolka Banaadir lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmadaas, Cabdi-kaamil Shukri, iyadoo xilka laga qaaday gudoomiyihii hore Cabdi Weli Yusuf Nabhaani.
Munaasabadaan uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee degmada Kaxda oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanno, mas’uuliyiin ka socotay maamulka Gobolka Benaadir, guddoonka cusub ee degmada, qeybaha kala duwan ee bulshada ku kunool degmada Kaxda ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka Ddegmadaasi oo uu dhawaan dhisay maamulka gobolka Benaadir.
Guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda, Cabdiweli Yuusuf Nabhaani oo goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in xilka gudoomiyenimo uu ku wareejiyo dgddoomiyaha cusub ee degmada Kaxda loo soo magacaabey, isagoo ka mahadceliyay intii la shaqeysay, kana codsaday inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Kaxda, Cabdi-kaamil Shukri oo munasaabada ka hadley ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono horumarinta adeegyada guud ee bulshada iyo xoojinta amniga, waxaana maamulkii isaga ka horeeyay uu uga mahadceliyay waxyaabihii ay degmada ka qabteen, isna uu halkaasi ka sii wadi doono.
Maxamed Aadaan Guuleed (Caano-geel) oo ah guddoomiye ku-xigeenka xagga siyaasadda iyo maamulka ee gobolka Benaadir oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa ugu baaqey bulshada ku nool degmada Kaxda iney la shaqeeyaan maamullka cusub ee degmada loo soo magacaabay, isagoo guddoonka cusub kula dar daarmay in uu la yimaado isbadal muuqdo.
Caano-geel ayaa sheegay in laga gudbay wixii ay Kaxdu tabaneysa, islamarkaana dadka deegaankaas laga doonayo iney bixiyaan dhulkii laga dhisi 4-ta laamood iyo 26-ka waaxood ee degmadaas.
Xidhibaan Cabdiweli Muudeey oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in degmada Kaxda ay u baahantahay in dadkeeda ay dhisaan, islamarkaana ay ka qeyb qaataan sugidda amniga iyo horumarinta degmada.
Degmada Kaxda oo ka tirsanaa jirtay degmada Dharkeynley waxaa magacaabay madaxweynihii KMG ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaase degmo-nimadeeda diiday gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muugaab, hase ahaatee dood dheer kadib ayaa maamulka gobolka Banaadir aqbalay degmo-nimada Kaxda oo noqoneysa degmada 17-aad ee gobolka Banaadir.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan muwaadin Turki ah oo lagu dilay Muqdisho